सेयर बजार सोचविचार गरेर मात्र लगानी गर्नुसः अर्थमन्त्री
Posted: 2018-05-09 21:03:48
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजार सोचविचार गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । सेयर बजार आफैंमा जोखिमको व्यवसाय भएको उल्लेख गर्दै उनले सुझवुझपुर्वक लगनीपुर्व लगनीकर्ताहरुलाई सुझाए ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा वुधबारदेखि सुरु भएको पुँजी बजार प्रदर्शनीको उद्घघाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सेयर बजारमा लगानी गर्नुअघि धेरै सोचविचार गरेर मात्र लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।
पुँजीलाई बैंकको निक्षेपमा राख्दा उचित र सुरक्षित प्रतिफल पाउने उनको भनाई छ । ‘सेयर बजार जोखिमको लगानी हो । यसमा लगानी गर्दा नाफा अनुसार घाटा पनि ब्यहोर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ’ उनले भने ।
डा खतिवडाले लगानीकर्तालाई भेडो भएर सेयर बजारमा लगानी नगर्न आग्रह गरेका छरे । डा खतिवडाले भने, ‘भेडो प्रवृत्तिको कारण सेयर बजारमा जोखिम बढ्दै भएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता आफैं सचेत बन्नुपर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जिवी नेपालले भने पुँजी बजारबिना मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘पुँजी बजारको विकासबिना मुलुकको विकास सम्भव छैन ।’
उनले हालसम्म जति मुलुक विकसित भएका छन, त्यो पुँजी बजारकै कारण भएको बताए ।
गभर्नर नेपालले पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने र भविष्य सुरक्षित बनाउने आधार पुँजी बजार नै भएको दावी समेत गरे । गभर्नर नेपालले सेयरलाई जोखिम न्यूनीकरण र विकासको सूचक भएको दावी समेत गरे । उनले स–सानो रकम पुँजी बजारमा लगानी गरे सुरक्षित भविष्यको आधार तयार हुने बताए ।
कार्यक्रममा धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष रेवत वहादुर कार्की, प्रवक्ता निरज गिरी लगायतले शेयर बजारका विभिन्न पक्षबारे प्रकाश पारेका थिए ।
काठमाडौंको भृक्ुटिमण्डपमा वुधाबारदेखि शुरु भएको पूँजी बजार प्रदर्शनी विहिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
प्रदर्शनीमा नेपाल स्टक एक्चेन्ज, सीडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि., धितोपत्र दलाल कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी, डीपी र आस्वा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरु, सुचिकृत कम्पनीहरुका साथै नेपाल राष्ट बैंक, बीमा समिति तथा आइक्यानको सहभागितामा करीब १७० बटा स्टल छन् । बजार सहभागिहरुको आफ्नो आफनो स्टल मार्फत आफ्नो संस्था र संस्थाले प्रदान गर्ने धितोपत्र बजार सेवा बारे लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी गराएको वोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । धितोपत्र बजार, सिडिएस तथा बजार पूर्वाधार व्यवस्था, मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसाय तथा धितोपत्र दलाल व्यवसाय सम्बन्धमा प्रस्तुती र अन्र्तकृया कार्यक्रमहरु संचालन हुने छन । धितोपत्र बजार सम्बन्धि अध्ययन सामाग्रीहरु निःशुल्क वितरण गरिएको छ ।